, अचम्मको मन्दिर ! जहाँ समुद्रमा तैरिन्छ शिवलिंग
फागुण १६, २०७६ | 28th February, 2020
अचम्मको मन्दिर ! जहाँ समुद्रमा तैरिन्छ शिवलिंग
11450 पटक पढिएको
भारतको तामिलनाडुमा रामेश्वरमको नजिक एक मन्दिरको शिवलिंग समुन्द्रमा तैरिन्छ । यहाँ भक्तजन पानीमा पसेर शिवलिंगसम्म पुग्छन् र पुजा गर्छन । किम्बदन्ती अनुसार यो ठाँउमा भागवान श्रीरामले रावणलाई युद्धमा हराएपछि विभीषणको राज्याभिषेक भएको थियो । रामेश्वरमदेखि १३ किलोमिटर दुरीमा कोन्थदारामार मन्दिर छ । जसलाई विभीषणको एकमात्र मन्दिर मानिन्छ ।
यो मन्दिरको छेउमा बंगालको खाडी र मन्नारको खाडीको समुद्र छ । यही समुद्रमा ढुंगाको शिवलिंग बनेको छ । जसलाई मानिसहरुले पुजा गर्छन् । यो शिवलिंग कहिलै समुद्रमा डुव्दैन । यो मन्दिरमा एक दुरबीन समेत राखिएको छ ।
जसको मद्दतले राम सेतु देख्न सकिन्छ । दुरबीनबाट सेतु हेरेको १० रुपैयाँ लिइन्छ । यहाँबाट समुद्रमा तैरिरहेको ढुंगाबाट बनेको पुल देख्न सकिन्छ । जुन पुल कुनै बेला ४८ किलोमिटर लामो थियो र लंकासम्म जोडिएको थियो ।
श्राद्ध कति प्रकारका हुन्छन् ? कुन श्राद्धको महत्व के ?
आफ्नै श्रीमतीको पोर्न भिडियो श्रीमानले देखेपछि…
झगडा छुट्टाउन आएका फुटबल खेलाडीकाे लिङ्ग नै टोकिदिए !
यस्तो बन्दैछ पर्यटकीय गन्तव्य गुरु फाल्गुनन्द सर्किट
मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि यौन दुर्व्यवहारको मुद्धा
प्रथम आयुर्वेदिक अधिवेशनमा जिल्ला कार्य समिति नवलपरासी सुस्ता पूर्व
झुटो आरोप लागेको भन्दै बाँस्कोटाले लगाए अडियो सार्वजनिक गर्ने मिश्रविरुद्ध मुद्दा
विद्यालय बन्दमा पनि बाहिर ननिस्किन बालबालिकालाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह